Ogadentoday Press » Madaxweynaha Eritrea oo Gobalka Axmaarada Booqanaya
OTP- Isbadalka balaadhan ee dhexmaraya Eritrea iyo Itoobiya ayaa dhacay bilihii u danbeeyay kaddib markii Xisbigii Qoomiyadda Tigreega ee TPLF ee ugu tunka weynaa Xisbiga Awooda dalka Itoobiya haya ee EPRDF lagaga awood roonaaday Doorashadii Xisbiga dhexdiisa.
Eritrea oo xidhiidhkeedii Taariikh ahaa ee Itoobiya soo celisay ayaa hadda mar kalle Madaxweyne Isayas uu booqasho ku tagayaa Gobalka Axmaarada ee Itoobiya halkaas oo khudbad dheer ka jeedin doono Caasimada Bahardar
Jabhada Ginbot 7 oo fadhigeedu ahaa Asmara haddana soo gashay Gobalka Axmaarada kaddib markii heshiis la galeen Ismaamulka Gobalka Axmaarada ayaa saldhigyo ciidan laga siiyay isla gobalka waxaana hadda samaysteen illaa 6 Xero ciidan.
Arrimaha sida weyn isku qaban la ayaa ah sababta Maamul Gobaleed uu heshiis ula gala Jabhada ka baxsan Dowlada midaas oo ahayd midi seegtay Maamulka Kililka Iyo Ururka ONLF loona arkayay tallaabo Siyaasadeed oo qaldan.
Laakiin Ururka ONLF iyo Jabhada Ginbot 7 ayaa labba kalla hadaf lahaa midkaas ONLF u arkaysay in heshiisa ay la gali karto oo kalli ah Dowlada dhexe maadaamo arrimaha laga hadlayo ahayd arrimo masiiri ah.
Dowlada Eritrea ayaa rabta dhamaan Ururada mucaaradka ah inay la heshiiyaan Itoobiya iyadoo midaas fududaynaysaa.
Itoobiya Iyo Eritrea ayaa doonayaa inay iska kaashadaan arimaha, Siyaasada, Dhaqaalaha Iyo Amniga geeska Afrika waxaana tallaabadan ka danbeeyay tallo bixino baddan oo Dalalka Reer Galbeedku siiyeen Eritrea iyo Itoobiya.
Eritrea ayaa hadda rabtaa in Shidaalka ka soo baxayaa Gobalka Soomaalida laga dhoofiyo dekadeeda isla markaasna arrintan Gobalka soomalida Ogaden loo helo xalsiyaasadeed.
Daafaha Dunnida oo Shirar Abaabul ka socdaan+Sawirro